आर्यन, मिरूना र साम्तेनको भाग्यपरीक्षा-‘च च हुईं’ – Everest Pati
भोलि शुक्रबारबाट साम्तेन भुटियाको निर्देशित ‘च च हुईं’ रिलिज हुँदैछ। सिनेमाको मुख्य भूमिकामा आर्यन सिग्देल र मिरुना मगरले जोडी बाँधेका छन्।यो सिनेमाबाट निर्देशकको साथमा आर्यन र मिरुनाले एउटै कामना गरिरहेका छन्- सिनेमा चलोस्।
कामना गर्नु स्वभाविक छ, किनकी यी तीनैका पछिल्ला सिनेमा वक्सअफिसमा सफल हुन सकेका छैनन्। यस्तोमा सिनेमा हिट होस् भन्ने आशा त तीनै जनाले राख्नु स्वभाविक हो।यो सिनेमाको सफलताले उनीहरुको करियरका लागि पनि महत्वपूर्ण छ।
सिक्किमबाट ‘लेटर’ सिनेमाबाट बोकेर नेपाल छिरेका साम्तेनका कुनै पनि सिनेमा वक्सअफिसमा सफल भएका छैनन्। डेब्यू सिनेमादेखि नै उनी निर्देशित सिनेमा लगातार असफल हुँदै आएका छन्। ‘तान्द्रो’ सिनेमाबाट मिलेको समीक्षकीय तारिफ बाहेक उनीसँग रमाउने अर्को कुनै सफलता छैन। तैपनि एकपछि अर्को गर्दै सिनेमा गरिरहेका साम्तेनलाई ‘च च हुईं’ चल्नु अति जरूरी छ।
यसैगरी ‘हजार जुनीसम्म’ अनि त्यसअघि रिलिज भएको ‘कायरा’बाट असफलता भोगेका आर्यनका लागि पनि यो सिनेमाको व्यापारिक रिपोर्टको अर्थ ठूलै छ। प्रेमकथाका रोमान्टिक पात्रमा विशेष रूचाइएका आर्यनका लागि यो सिनेमाले कस्तो नतिजा ल्याउँला? त्यो समयले बताउँला।आर्यनकै जस्तो अवस्थामा छिन् नेपाली रजतपटकी नवप्रवेशी मिरुना मगर।
‘लाल पूर्जा’बाट नेपाली रजतपटमा डेब्यू भएकी मिरुनाका त्यसयता रिलिज भएका सिनेमा बिर्सनलायक नै छन् । लगातार सिनेमा नचलेका कारण उनले अभागी अभिनेत्रीको आरोप खेप्न थालिसकेकी छन्। यस्तोमा उनलाई यो सिनेमाको सफलताले निक्कै ठूलो अर्थ राख्छ।निर्देशक र दुई कलाकारका लागि सिनेमा महत्वपुर्ण भएपनि सिनेमाले उनीहरूलाई खुशीको खबर दिने सम्भावना कठिन छ।
सिनेमाको प्रचार सुस्तताले सिनेमा सफल होला भन्ने कुरामा शंका व्यक्त गर्ने आधार दिएको छ। यस्तोमा सिनेमाले आफूलाई कस्तो सावित गर्छ? ‘च च हुईं’ अगाडि तेर्सिएको प्रश्न यही हो।
अमृत सापकोटा र उनको श्रीमती पहिलोपटक टुडिखेलमा लाखौ दर्शकको बिचमा दोहोरी खेल्न…
रविलाई ‘सेन्टी भाइरस’ मन नपरेपछि धुर्मुसलाई दिए यस्तो सुझाव (हेर्नुहोस भिडियो सहित)
बिहीबार जन्मिने व्यक्तिको भाग्य कति बलियो ? प्रेम विवाहको सम्भावना अधिक
एका बिहानै पाथिभरा माताको दर्शन गर्दै तपाइको आजको राशिफल हेर्नुहोस
बानेश्वरको पाटी प्यालेसमा विवाहको भव्य तयारी, वेहुला नै नआएपछि बुझ्न…
अमृत सापकोटा र उनको श्रीमती पहिलोपटक टुडिखेलमा लाखौ दर्शकको बिचमा…
पत्रकार शिवाकोटीको सुरक्षामा ध्यान दिन पत्रकार महासंघको आग्रह
देश छोडेर बेलायत बस्न जान लागेको भन्ने आरोप लागेपछि सुजाता कोइरालाले…